नेपाल आज | डा.गोविन्द केसी हत्यारा हुन : प्रदेश सांसद डा. अधिकारी
डा.गोविन्द केसी हत्यारा हुन : प्रदेश सांसद डा. अधिकारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गर्न र समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको कुरा स्पष्ट पारेकी छिन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्व्मा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भनिन्,‘चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदमा पुगेको छ, संसदले नै उहाँले उठाएका मागहरुलाई बैधानिकता दिने हो, उहाँले चाहेको संशोधनलाई सांसदहरुमार्फत कुराहरु राख्न सक्नुुहन्छ, कानूनी बाटोबाट मात्रै समस्या समाधान हुन्छ, अनशन बसेर हुँदैन, हिजोका दिनहरुले पनि यही कुराहरु देखाईसकेको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले गोविन्द केसीले उठाएका माग कुनै राजनीतिक दल वा समुहका पक्षमा नभई नेपाली जनताको पक्षमा रहेकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षडा. ढुण्डीराज पौडेललेगोविन्द केसीसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षालाई सरकारले निजिकरण गर्न खोजेका कारण गोविन्द केसी अनशन बस्न बाध्य भएको पौडेलको आरोप थियो ।
नेपालको चिकित्सा सेवा काठमाडौं केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुम्लामा खोलिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आधारभूत सेवा समेत हुन नसकेको बताए ।
“जुम्लामा विशाल अस्पताल छ । तर ब्लड कल्चरसमेत गर्ने व्यवस्था छैन । यो सब निजीकरणका नाममा भएको कमजोरी हो ।” पौडेलले भने ।
अहिले मेडिकल कलेजको मान्यताका लागि भइरहेको चलखेल कमिसन र चन्दाका कारण भएको उनले बताए ।
“चुनावमा निजी क्षेत्रसँग चन्दा मागियो । अहिले तिनै व्यक्तिको मेडिकल कलेज जोगाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । अनि कसरी जनताको हितमा विधेयक बन्छ ?” पौडेलले भने ।
भ्रष्ट नेता र मन्त्रीलाई रद्दीको टोकरीमा नफालेसम्म देश विकास नहुने उनको जिकिर छ । माथेमा प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर पौडेलले प्रश्न गरे ।
पौडेलले रिपोर्टस क्लबमा भएको बहस फलदायी हुने भन्दै आजको बहसले पनि एउटा निश्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । विगतमा पनि डाक्टर केसीको अनशन र मागका बारेमा क्लबका सभापति ऋषि धमलाले एजेण्डा उठान गर्दा सहमति जुट्ने गरेको पौडेलले सुनाए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्य एवम् प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका संस्थापक सदस्यडा.रामकुमार अधिकारीले पत्रकाहरुले डा. गोविन्द केसीलाई देवत्वकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘माथेमा आयोग र डा.केसी हत्यारा हुन, बंगलादेशमा डा.पढेर आएका नेपाली विद्यार्थीहरु गत वर्ष फागुनमा विमान दुर्घटनामा परेर मरे, यसको दोषी उहाँहरु नै हो, नेपालमा डाक्टरी पढ्न पाउने वातावरण भएको भए उनीहरु मर्ने थिएनन्।’